Aphrodite Izihloko > Aphrodite Basics > IProfayili yaseAphrodite
UAphrodite unkulunkulukazi wobuhle, uthando, kunye nesondo. Ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yiCyprian ngenxa yokuba kwakukho isikhungo senkolo saseAphrodite eCyprus [Bona iMephu Jc-d ]. U-Aphrodite unina wonkulunkulu onothando, uEros (oqhelekileyo njengeCapeid). Nguyena umfazi onobubi kunabo bonke oothixo, uHephaestus . Ngokungafani noothixo abanamandla abanamandla, u- Athena no- Artemis , okanye unkulunkulukazi othembekileyo womtshato, uHera , uthanda izinto kunye noothixo nabantu. Ibali lokuzalwa lika-Aphrodite lenza ulwalamano nabanye oothixo noothixokazi baseMat. IOmberus
Iingoma ezibandakanya i-Aphrodite
Iingoma zitsho kwakhona nguTomas Bulfinch malunga neAphrodite (Venus):
Cupid kunye nePsk
IAventas of Aeneas
Prometheus kunye nePandora
Proserpine - Glaucus kunye neScylla
Homer on Mars kunye neVenus Efunyenwe kwiNet
UHesiod uthi i-Aphrodite yavela kwi-foam ehlangene kunye neenqunu zika-Uranus. Zenzeka nje ukuba zijikeleza elwandle - emva kokuba unyana wakhe uCronus wamgxotha uyise.
Umbongo obizwa ngokuba nguHomer ubiza uAphrodite intombi kaZeus noDione. Kwakhona uchazwa njengendodakazi ka-Oceanus kunye neTethys (zombini iTitans ).
Ukuba u-Aphrodite uyinzala-ka-Uranus, unesizukulwana esifanayo nabazali bakaZeus. Ukuba uyintombi yeTitans, ungumzala kaZeus.
U-Aphrodite wayebizwa ngokuba yiVenus ngamaRoma - njengowomfanekiso odumile waseVenus de Milo.
Iimpawu zikaThixokazikazi waseRoma Venus
Iimpawu kunye neMibutho
I-Mirror, ngokuqinisekileyo-nguyena uthikazi wobuhle.
Kwakhona, i- apula , enamaqela amaninzi kunye noluthando okanye ubuhle (njengokulala kwi-Beauty) kwaye ngakumbi i-apple yegolide. U-Aphrodite unxulumene nombhinqo wemilingo (ibhande), ihobe, imore kunye nomriti, ihlengethwa, kunye nokunye. Kwi-Botticelli eqingqiweyo yokupenda, i-Aphrodite ibonakala ivela kwi-shell shell.
Imithombo yamandulo ku-Aphrodite iquka uApollodorus, Apuleius, Aristophanes, Cicero, Dionysius of Halicarnassus, Diodorus Siculus, Euripides, Hesiod, Homer, Hyginus, Nonnius, Ovid, Pausanias, Pindar, Plato, Quintus Smyrnaeus, Sophocles, Statius, Strabo kunye Vergil (Virgil ).
Imfazwe yeTrojan kunye neAeneid's Aphrodite / Venus
Ibali leMfazwe yeTrojan iqala ngebali le-apple yokungahambelani, okwakwenziwa ngokwemvelo ngegolide:
Hera - unkulunkulukazi womtshato nomfazi kaZeyus
Intombi ka-Athena - Zeus, unkulunkulukazi oyingqiqo, kunye nomnye onkulunkulu abanqabileyo abanamandla abakhankanywe ngasentla, kunye
wayecinga ukuba ufanelwe i-apula yegolide, ngenxa yokuba yi- kallista 'eyona nto intle'. Ekubeni oothixokazi babengenakukwazi ukwenza isigqibo phakathi kwabo kunye noZeus wayengavumi ukuxhatshazela ingqumbo yabesifazane kwintsapho yakhe, oothixokazi babhenela eParis , unyana kaKumkani Priam waseTroy . Bamcela ukuba agwebe ukuba yeyiphi enye inhle kakhulu kubo. I-Paris yagweba unkulunkulukazi wobuhle ukuba yiyona nto yothando. Ngokubuyisela isigwebo sakhe, u-Aphrodite wathembisa iParis umfazi ongcono. Ngelishwa, le nto yokufa yayinguHellen waseSparta, umfazi kaMeneus. I-Paris yathabatha umvuzo owawunikezwa nguAphrodite, nangona wayezibophezele ngaphambili, waza waqala imfazwe edumileyo kwimbali, phakathi kwamaGrike namaTrojans.
U-Vergil okanye u-Virgil's Aeneid uxela ibali le- Trojan War sequel malunga nenkosana yeTrojan, u-Aeneas, ukuthutha oothixo bakhe emzini oshisayo eTroy waya e-Italiya, apho ufumana umncintiswano wamaRoma. Kwi- Aeneid , inguqulo yamaRoma yaseAphrodite, uVenus, unina ka-Aeneas. E- Iliad , wayekhusele unyana wakhe, kwindleko yokubandezeleka kwilonda elibangelwa yi-Diomedes.
I-12 yama-Olympian kunye noodadekazi
I-Zac Brown Band Biography
Usebenza njani ngeVolcano?
Umqhubi weWalter Dean Myers Book Review